Adobe InDesign mankalaza 20 taona amin'ny endrika ambony | Famoronana an-tserasera
20 taona niainan'ny Adobe InDesign
InDesign nivadika 20 taona tamin'ny 31 Aogositra Ary toa vao tsy ela akory izay no nanomboka nihazakazaka ity programa famolavolana ity. Ny marina dia tsy naka sary an-tsaina isika nandritra ny taona maro niarahanay taminay mba ho rindrambaiko fisehon-javatra lehibe kokoa.
Navoaka tamin'ny 31 Aogositra 1999 ary ho fahatsiarovana izany ananan'i Adobe nanolotra fanangonana zavatra ara-tantara Ny rakitra Adobe hanehoana ny fivoaran'ny InDesign rehefa nandeha ny fotoana. Izahay dia hizara azy aminareo rehetra mba hahafantaranareo ny diany sy ny antony maha-izy azy.
Ny tanjon'ny InDesign dia ny hanavao ny indostria mpanonta pirinty sy nomerika miaraka amin'io rindrambaiko io ho an'ny famolavolana typografika sy ny firafitra. Fandaharana iray izay ilaina amin'izao fotoana izao ho an'ny orinasa sy ny matihanina maro ao amin'ity sehatra ity mba hametrahana ireo magazine, brochure ary famoahana ilaina hafa.
InDesign dia tonga tamin'ny andiany 1 miaraka amin'ny fikasana rehetra ho tonga referansa, fa tsy hatramin'ny 2.0 izany, nohavaozina avy eo ambany, raha ho lasa ampahany amin'ny MacOSX izy io ary ho lasa mpandefa famolavolana nandritra ny am-polony taona maro.
Fandaharana iray izay efa ampiasain'ny magazine toy ny WIRED ary efa zatra izany ny fanontana voalohany ho an'ny iPad. Fitaovana manatsara hatrany ny famoronana làlan-kiasa tsara kokoa sy manatsara ny fampidirana ny Adobe Sensei ary koa ny Content Aware Fit. Fitaovana hanatsarana ny fahombiazan'ny matihanina ary handany ny fotoanany amin'ny famoronana sy famoronana.
Ity fanangonana singa ara-tantara ity dia mampiseho ny fivoaran'ny programa renivohitra ho an'ny Creative Cloud suite ary lasa ampahany amin'ny tantaran'ity orinasa ity na amin'ity taona ity aza nahazo ny Oscar voalohany avy amin'ny Hollywood Academy. Aza adino ity maodely ity miaraka amin'ny hitsin-dàlana fitendry.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » 20 taona niainan'ny Adobe InDesign
Marika marika divay mahaliana 5
Facebook dia mieritreritra ny hanafina ny tiany amin'ny lahatsoratra